१६ वर्षीय किशोरीको बयान : चकलेट, बिस्कुट, चाउचाउ दिन्छु भन्दै नौ जनाले पालै पालो …… – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौं । इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचौर सुर्खेतले १६ वर्षीया बालिका क रणी ग रेको आरोपमा नौजनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले क रणीको आरोपमा पञ्चपुरीका डम्बर वादी, गणेश वादी, युवराज शाही, खगेन्द्र भनिने शोभा शाही, बाबुराम पुरी, प्रेम बुढाथोकी, शेरबहादुर सार्की, ओम दर्लामी र प्रेमबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। ति बालिकाको चिकित्सकीय परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखाएको उनले बताए।
Previous कुलमानलाई ओलीले लगाए यस्तो गम्भिर आरोप,ठिक कि बेटिक ? कृपया आ -आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् !
Next अक्षय कुमारकी आमाको निधन, अक्षयले लेखे यस्तो भावुक स्टाटस